Pregabalin powder Manufacturer & Factory
/ Products / vamwe / Pregabalin upfu
Rating: SKU: 148553-50-8. Category: vamwe
AASraw iri pamwe neyekushongedza uye kugona kugadzira kubva giramu kusvika kuwanda kurongeka kwePregabalin poda (148553-50-8), iri pasi peCGMP mvumo uye inotevedza yemhando yekudzora system.
Raw Pregabalin powder Basic Characters
Molecular Kurema: 159.23
Color: Yakachena kana kuti inopera white Crystal Powder
Raw Pregabalin powder kushandiswa mu steroid cycle
Pregabalin powder inowanzonzi Lyrica nevadzidzisi vemiti kana vaGL.
Pregabalin powder Usage
Pregabalin poda inobatsira kana yakawedzerwa kune dzimwe mishonga, apo dzimwe mishonga haisi kuronga kushaya kamuviri kwechifo. Kushandiswa kwaro chete hakusi kushanda kudarika mamwe mimwe mishonga yekubata. Hazvizivikanwi kuti unoenzanisa sei na gabapentin nekuda kwekushandisa uku.
European Federation of Neurological Societies inokurudzira Pregabalin powder semutambo wekutanga wokugadzirisa marwadzo anokonzerwa nechirwere cheshuga chirwere, post-herpetic neuralgia, uye chirwere chepfungwa chinonzi neuropathic. Vechidiki vanowana rubatsiro rwakakura, uye nhamba yakakura inowana rubatsiro rwakakwana. Mamwe mavara ekutanga, anosanganisira gabapentin uye tricyclic anodzvinyirira, anopiwa uremu hwakaenzana sekutanga mavara, uye zvakasiyana nePregabalin powder, inowanikwa seasina mari yakawanda.
Pregabalin powder haisati yakurudzirwa kune mamwe mhando dzemarwadzo europathic akadai sokuti trigeminal neuralgia uye kushandiswa kwayo muhutano-hunosanganiswa neuropathic kurwadziwa kunopesana. Hapana humwe uchapupu hwekushandiswa kwahwo mukudzivirira kwemigraine uye gabapentin yakawanikwa isingabatsiri. Yakaongororwa nekuda kwekudzivirira kwemazuva mashure-ekuvhiya kurwadziwa kusingaperi, asi kushandiswa kwechikonzero ichi kunopesana.
Pregabalin powder haigoni kuonekwa seinobudirira mukurapa kurwadziwa kwakanyanya. Miedzo yekuongorora kushandiswa kwePegabalin powder kuitira kurapwa kwemarwadzo anonyanya kuvhara mushure mokuvhiya, hapana chakaipa pamatambudziko ose akaenzana akaonekwa, asi vanhu vaida zvakaderera morphine uye vane zvido zvishoma zvine chokuita neopioid. Nzira dzinoverengeka dzinogoneka dzokuvandudza kurwadziwa dzakakurukurwa.
Matambudziko okuzvidya mwoyo
IWorld Federation of Biological Psychiatry inokurudzira Pregabalin powder seimwe yezvikamu zvakasiyana-siyana zvinotanga kushandiswa kwehutano hwehuwandu hwehutano hwepfungwa, asi inokurudzira mamwe mazamu akadai seSRRIs sokutanga mushonga wokurapa kwekusagadzikana-kusagadzikana kwehutano uye mushure mekurwadziwa kwepfungwa dambudziko. Zvinoratidzika kuva nechinetso chekuzvidya mwoyo zvinokonzerwa ne benzodiazepines ine ngozi shoma yekuzvidzivirira.
Migumisiro yePregabalin powder inoonekwa mushure me1 yevhiki yekushandiswa uye yakafanana mukubudirira kwe lorazepam, alprazolam, uye venlafaxine, asi Pregabalin powder yakaratidza kukunda kuburikidza nekuwedzera zvinogadzirisa maitiro ekugadzirisa kwepfungwa dzekushushikana kwepfungwa. Nguva yakareba miedzo yakaratidza kubudirira kubudirira kunze kwekusimudzirwa kwekushivirira, uye, nekuwedzera, kusiyana ne benzodiazepines, inobatsira pamubhedha nehope dzakagadziriswa, dzakaratidzwa nekusimudzirwa kwepfupi-wave kuvata. Iyo inobereka kukanganisa kwakanyanya kunetseka uye kwepfungwa kufananidza nemishonga iyoyo; iyo inewo mikana yakadzika yekushandiswa nekushungurudzwa uye kuvimba uye inogona kusarudzwa pamusoro pe benzodiazepines nekuda kwezvikonzero izvi.
Iyo Pregabalin poda inoshanda sei
Nzira iyo Pregabalin powder inoshanda haina kunyatsonzwisiswa. Iyo inofungidzirwa kushanda nekusunga kune calcium chiteshi inowanikwa pane maseru etsinga muuropi uye musana. Izvi zvinoderedza kuburitswa kwemaurotransmitter akasiya-siyana kubva mumasero etsinga aya.
Neurotransmitters muviri wemhuka makemikari anochengetwa mumasero emagetsi. Ivo vanobatanidzwa pakuperekedza mharidzo pakati pemasero emagetsi. Pregabalin powder inofungidzirwa kuderedza kusunungurwa kweeurotransmitters inonzi glutamate, noradrenaline uye zvinhu
Glutamate inonzi neurotransmitter inoshanda seyakajairwa 'nerve-inonakidza' mumiriri. Inoburitswa apo maseru emagetsi anovaka mumasero etsinga uyezve inonakidza mamwe maseru etsinga. Inofungidzirwa kuti inoita chinzvimbo chakakosha mukukonzeresa pfari. Kuderedza kuburitswa kwe glutamate kubva mumasero etsinga muuropi inofungidzirwa kubatsira kubatsira kudzikamisa mashandiro emagetsi muuropi uye kudzivirira kukwana kwepfari.
Glutamate, chinhu P uye noradrenaline inobatanidzwawo pakupinza zviratidzo zvinorwadza muuropi uye nervous system. Sezvo Pregabalin powderedza inoderedza kusunungurwa kweivotitransmitter iyo inogona kushandiswawo kubata chirwere chendangara chinoitika sechikonzero chekukuvara kwehuipi, kana kushungurudzika mune basa remitsipa.
Pregabalin poda inogonawo kushandiswa kurapa chirwere chinokonzera kushungurudzika, izvo chimwe chiitiko chinofungidzirwa kuti chinosanganisira pamusoro pebasa re glutamate, pfuma P uye noradrenaline muuropi.